XOG RASMI AH: Isimadda gobalada Sool, Sanaag & Cayn oo maanta go`aan mideysan ka qaadanaya Xaaladda Puntland. – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Isimadda gobalada Sool, Sanaag & Cayn oo maanta go`aan mideysan ka qaadanaya Xaaladda Puntland.
October 15, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay socdeen saacadihii lasoo dhaafay kulamo khaas ah oo ay lahaayeen Isimadda gobalada Sool, Sanaag & Cayn oo kuwajahan xaaladda gobaladaas iyo arrimaha xulida golaha baarlamaanka Puntland sidii ay ka yeelayaan, waxayna maanta ku beegan tahay 11 sanno guuradii kasoo wareegtay markii ay inta badan Isimadaas ka qaxeen magaalada Laascaanood.
Xogta soo gaartay Puntlandtimes.com waxay cadeynaysaa in kulamadaas kuwooda ugu muhiimsan uu shir gudoomiyey Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo ah Isinka ugu da’ada weyn Isimadda gobaladaas, oo looga hadlay sidii laga yeeli lahaa marxaladaha dul-hoganaya bulshada gobaladaas.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo la hayo ilaa hadda, balse xogta ayaa sheegaysa in Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo ah saxiixaha 9 kursi ama Xildhibaan uu hadda diidan yahay in uu aqbalo in uu saxiixo warqadahooda.
Sharuudaha ugu badan ee diidmada keenaysa ayaa ah in aysan jirin sabab ay beesha Dhulbahante wax ula qeybsato beelaha Puntland, xili gobalka Sool gacanta ku hayso Somaliland oo Tukaraq ugu dambeysay qabsatay horaantii sannadkan aana waxba laga qaban.
Wararka ayaa sheegaya in ay xubnahan la hadli doonaan Saxaafaddaha nagu soo aadan, inkastoo ay baaqan karto oo ay dhinacyadu aad ugu nug-leeyihiin arrimaha siyaasadda ee waqtigan socda.
Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ayaa ahaa shaqsiga kaliya ee si cad banaanka ugu baxay sidii loo soo celin lahaa magaalada Laascaanood, horaantii sannadkan waxaana la rumeysan yahay in tiro ka badan 4 jeer uu la kulmay Madaxda hadda xilka haysa oo uu kala hadlay soo celinta gobalkaas, laakiin wixii lagu balamay ay socon waayeen.
Lama garanayo waxa dhici doona haddii beesha Dhulbahante ay soo dooran waayaan 17 Xildhibaan oo ka mid noqonaya 66da Xildhibaan ee baarlamaanka Puntland, waxaana muuqanaysa in wajiga doorashada 2019-ka wax badan ka duwanaan doono kuwii horey u dhici jiray, xili beesha Dhulbahante ay gorgortan cad ku galayso arrimaha ku wajahan soo celinta gobalka Sool.